Ravinala Airports Nosy Be: tratran’ny Sofitrans izao ny fenitra eoropeanina | NewsMada
Ravinala Airports Nosy Be: tratran’ny Sofitrans izao ny fenitra eoropeanina
Samy ho an’ny fitaterana ana habakabaka, manamafy ny fiaraha-miasany ny Sofitrans sy ny Ravinala Airports any amin’ny seranam-piaramanidina Nosy Be. Asa goavana hifanampiana iarahan’ny tonta taorian’ny filankevitra niombonan’izy ireo ny hanatsarana ny seranam-piaramanidina any an-toerana. Tratran’ny Sofitrans izao ny fenitra eoropeanina eo amin’ny tontolo iainana sy ny fahadiovana. Noho izany, tsy maintsy fonosana azo ahodina ny fampiasa. Manantombo ny lazan’ny seranam-piaramanidina izany, manomboka amin’ny sakafom-paritra sy manerana ny Nosy amin’ny ankapobeny.
Nosokafana izao ny « Cosy Café » roa an’ny Sofitrans ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa. Nanomboka nisokatra, ny 30 novambra teo, izany ao anatin’ny efitra fiondranana eto an-toerana sy mankany ivelany. Asa vaovao maro, mivantana na tsy mivantana, no miforona amin’izao fiaraha-miasa izao.
Mihevitra ny hanao toy izany manerana ny Nosy ny Sofitrans. Mifandraika amin’izay ny fanadihadiana iarahan’ny roa tonta hanomezana tolotra sy vokatra vaovao ho an’ireo mpizahatany. Fanamby lehibe ny vitan’ny Sofitrans sy ny Ravinala Airports ho fanomezana tolotra tsara kalitao ho an’ny mpanjifa.